Akwukwo ozi nke Blog nke ihe ndi India kwudoro "Ndi" THE INDIAN FACE
Akụkọ ndụ Juan Menéndez Granados
Juan Menéndez Granados abụrụla ihe mmụọ nsọ maka egwuregwu na imeziwanye onwe onye. Sia enye osụhọrede idem ndinyịme ke ndịk anam enye, tutu enye afiak ọbọ
10 Akụkọ Ifo
Anyị achịkọtala ụfọdụ akụkọ egwuregwu ama ama ama ama ama ụwa na-echefu echefu. Nọgide na-agụ ma atụla nnukwu akụkọ ha!
Kilian Jornet Burgada: Biography nke onye isi
Kilian Jornet abụrụla akụkọ akụkọ ugwu na-adịbeghị anya. Ọchịchọ ya, ịdị egwu egwuregwu na akụkọ ihe mere eme mere ka ọ bụrụ onye na-agba ọsọ ugwu kachasị mma n'ụwa ma bụrụkwa ihe nnọchianya nke mmasị.
N’ime afọ 58, onye mmeri ụwa Rly ugboro abụọ, Carlos Sainz Cenamor, enwetara ntuli aka na nso nso a Onye ọkwọ ụgbọ kacha mma na WRC ha enyekwala ndị kachasị mkpa 2020 Princess nke Asturias Award Ma ọ bụghị maka obere!
Aterszọ skat 10 kachasị mma na amamihe na Instagram
Girlsmụ nwanyị Skater esonyela n'egwuregwu skateboarding nke ọkachamara na nkà ha. Site na nmalite ya na California (USA) n'afọ ndị 60, a na-enye ịdọ aka ná ntị a na gburugburu ebe ụmụ nwoke nọ. Mana ugbu a, dịka n'ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ dị oke egwu, ụmụ agbọghọ ahụ egosila na ha tozuru ọnọdụ ha dị mma na ụwa skate. Thesemụ nwanyị ndị amaka nwere nkà na-atụ anyị niile nkà na usọ ha, mana onweghị onye gwara anyị na ha ga-adị oke mma na-eme aghụghọ ha na skateboard!
Edurne Pasaban, obere akụkọ banyere eze nwanyị nke puku mmadụ asatọ
Edurne Pasaban, obere akụkọ banyere eze nwanyị dị afọ asatọ, Edurne Pasaban bụ nwanyị Tolosa mụrụ na Ọgọst 1, 1973, ugwu ugwu, nke a ga-echeta dịka nwanyị mbụ gbagoro ụwa nke puku afọ iri asatọ na anọ. Ihe egwu ya mere ka afọ itoolu kemgbe o tiri Everest na Mee […]
Anyị gbara ajụjụ ọnụ banyere Samira site na MHYV
En The Indian Face anyị nwere mmasị ịhụ etu ndị mmadụ si anụ ụtọ ndụ na nke a, anyị ezutela Samra Salomé, onye na - emekọrịta ugbu a na @Radioset n'ime mmemme @partidoapartido, yana onye sonyere na TV-Show mbụ. MHYV Umu nwanyi, umu nwoke na ndi ozo. Onye masiri ndụ ya, onye megosila nrọ ya, parachute na Dubai.
Kolohe Andino: otu n'ime foto ndị kacha ese foto ma sorokwaa
N’osisi dị otú ahụ, na ntanye dị otú ahụ: nna nke Kolohe Andino bụ Dino Andino n’onwe ya, onye ASP WCT surfer. Site na ụdị mmalite a na iburu n'uche ebe o toro, San Clemente, a na-agbachitere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nkwa kachasị mma (ewezuga ịbụ otu n'ime nnukwu akwara ebe a na-egwu mmiri n'ụwa niile), abụghị […]
Melania Suárez: nkwa dị obere nke mmụba ụmụ nwanyị Spain
Ajula ya maka W WCins ole na ole ma. Eleghị anya ntakịrị oge. Ọ bụ ihe dị otú o kwesịrị, ịdị na-eto eto mgbe ahụ. Eziokwu bụ na ọ dị naanị afọ 11, mana naanị ị ga - ahụ ya ka ị hụ ntụkwasị obi nke onwe ya nke ọ na - egosi na ọ ga - amalite ọdịnihu dị mma maka obere ọdịnihu a. Melania Suárez bụ […]
Toni Medina: n'okporo ụzọ ngwakọ na skater skater
Toni Medina bụ onye skateboard dị afọ 26 si Blanes, bụ obodo dị na Costa Brava, ọ nọkwa na-agbagharị kemgbe ọ gbara afọ itoolu. Ọ hụrụ n'anya na egwuregwu a na-ekiri vidiyo nke Powell Peralta na Kevin Harris na modality nke dọtara ya mmasị kachasị bụ freestyle.
Kevin Pearce: Snowlanahụ Snowboard
Mgbe ihe ọghọm nke ọ nwere ike ibubata ya na nsogbu, Kevin Pearce malitere njem ọhụụ nke ndụ. Taa, anyị na-agwa gị ntakịrị ihe gbasara onye na-agba ịnyịnya a.
Lucas Eguibar, onye n’egwuregwu ụwa nke snow n’oghere akara
Lucas Eguibar, onye 21 dị afọ iri na ụma na-agba Spain (Guipúzcoa), onye anyị kwurula banyere ya n'isiokwu na blọọgụ ọnwa ole na ole gara aga, bụrịrị akụkọ akụkọ banyere mbịọnị na egwuregwu obodo anyị.
Shaun White, otu n'ime ihe ndị kacha mma na-enyocha ikuku na ụwa
Shaun Roger White, onye a ma ama n’egwuregwu bọọdụ mba ụwa ka a mụrụ Shaun White, amụrụ na Septemba 3, 1986 na Carlsbad (San Diego), California, bụ onye mbido snow na ọkachamara nwere skateboarder ma kpọsaa ya ugboro abụọ ịbụ onye nrite ọlaedo. N’egwuregwu Olimpik.
REMountain: skai na akuko ugwu
Alberto Pantoja Dorda, Álvaro Pantoja Dorda na Luis Pantoja Trigueros bụ ndị otu RecMountain. Ọkachasị n’elu ugwu, nka onye amazi n’onyinyo na ọkachamara na nivometeorology n’otu n’otu.
Jan Farrell, sọsọsọsọsọsọsọw ụwa
O nwere ike osoo ike site na 0 ruo 120 km / h na naanị sekọnd anọ site na naanị enyemaka nke skis na slopes nke ihe karịrị 100% (45º). Jan Farrell, sọsọsọsọsọsọsọw ụwa.
Yuki Kadono: olileanya ndị Japan nwere maka ịkwọ ụgbọ mmiri
Onye na-agba Japan bụ Yuki Kadono malitere njem ya n'ụwa nke ịkwọ ụgbọ mmiri mgbe ọ dị nanị afọ 8 yana n'okpuru nna ya. Site na oge mbụ, Yuki raara onwe ya nye na ọzụzụ egwuregwu a.
Russel Henshaw: onye nwere onyinye na onye na-enweghị ike ịkwụsị akwa sọọsọ Australia
Ọ bụghị Australia ka mmalite nke ndị ọkwọ ụgbọ elu ụwa, mana Russell Henshaw bụ ihe dị iche na nke a. A mụrụ Russell na Sydney na 1990 na site na mgbe ọ dị obere, o doro ya anya na ya bụ ski.
Chuck Patterson, onye banyere skis
You ma Chuck Patterson? Ọ bụrụ onye a ma ama karịa dị ka onye na skis, ọ dị mma ịhụ ya na emereme. Ọ bụ ọkachamara n'egwuregwu sọks ma bụrụ ọkachamara na sọks, a maara ya nke ọma maka ịdekọ vidiyo na-eme ngwakọ nke egwuregwu abụọ ahụ.
María Hidalgo, ọrụ na-eweta mbugharị nke snow
Newlọ akwụkwọ ọhụrụ maka ndị na-agba Spain bụ María Hidalgo nọchitere anya ụlọ akwụkwọ ọhụrụ maka ndị na-agba ịnyịnya na-apụta na Spen. Ọ dị naanị afọ 18, a na-atụlekwa ya nke ukwuu n'obodo snow dị n'obodo anyị. Ihe a niile bidoro mgbe nne ya malitere n’elu skis mgbe ọ dị naanị afọ abụọ. Iji […]